Ginea Bisao - Wikipedia
I Ginea Bisao dia firenena any Afrika Andrefana izay manana morontsiraka amin' ny Ranomasimbe Atlantika. Manana velarana mirefy 36 120 km² izy ka ny 28 000 km² tany maina fa ny 8 120 km² kosa ranomasina. I Bissau no renivohiny. Nisy mponina miisa 1 833 247 tao tamin' ny taona 2018. Ny tapany iray amin' i Ginea Bisao dia eny amin' ny tanibe (2/3) izay tany lemaka a-morontsiraka be honahona sy be ala sy an-dembalemba rakotra hivoka aman-kazo maniry, fa ny ampahany sisa dia nosy (1/3) miisa 60 any ho any ao amin' ny tangoro-nosin' ny Bijagós ny ankamaroany.
Sainam-pirenen'i Ginea Bisao.
Sarintany maneho an'i Ginea Bisao sy ireo firenena manodidina azy.
Vondrom-poko maro no mamorona ny vahoakan' i Ginea Bisao, ka anisan' izany ny Balanta sy ny Peola ary ny Malinke. Manaraka ny fivavahan-drazana animista ny 65 %n' ny mponina ao Ginea Bisao, fa ny 30 % kosa Miozolmana (indrindra ny Peola sy ny Malinke) ary ny 5 % Kristiana. Ny fambolena sy ny fiompiana no foto-piveloman' ny ankamaroan' ny mponina ao Ginea Bisao. Ny fiteny pôrtogey no fiteny ôfisialy ao Ginea Bisao.
I Ginea Bisao ao Afrika
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginea_Bisao&oldid=1040794"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:09
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:09 ity pejy ity.